Ii-Heterocycle - APICMO Abakhiqizi be-CDMO
iimveliso > IiHeterocycle
Ii-heterocycle zihlala ziphela kwindalo, kunye nezicelo ezininzi zoshishino, nakuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Kwizinto zendalo zivela kwiifom ezininzi, kwaye zinezinto ezibaluleke kakhulu eziphilayo - "iimolyuli zobomi." Izicelo ze-heterocycle ezithathwe kwi-chemistry, biology, iyeza, ezolimo, kunye noshishino yi-legion.
I-heterocyclic compound okanye i-ring structure iyinxalenye ye-cyclic enama-atom ubuncinane ubuncinane beempawu ezinjengeemigangatho yayo .Umzobo we-chemotherapy yi-branch of organic chemistry ejongene ne-synthesis, iipropati kunye nezicelo zezi heterocycle.
Imizekelo yeemveliso ze-heterocyclic ziquka zonke iicucleic acids, uninzi lweziyobisi, ininzi ye-biomass (i-cellulose kunye nezinto ezihambelanayo), kunye neentlobo ezininzi zendalo
ukubonisa 1-12 of 21 iziphumo